အမေဇုံမီးသတ်တီဗီ Stick ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: စျေးပေါ, ဂရိတ်တီဗီလွှစက် - သတင်း Rule
အမေဇုံမီးသတ်တီဗီ Stick ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: စျေးပေါ, ဂရိတ်တီဗီလွှစက်
Voice ကိုလက်ထောက် smarthome အင်အားကြီးသို့ဘတ်ဂျက်စမတ်တီဗီချောင်းကိုပြောင်းလဲ, but keeps simple controls, wide UK catchup TV and third-party app support
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Amazon Fire TV Stick review: စျေးပေါ, great TV streaming device with new interface and Alexa” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, for theguardian.com on Monday 10th April 2017 10.31 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Plug the HDMI connector into the back of your TV and the included microUSB cable and power adapter into the port on the side. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Along with reading out the weather report, Alexa flashes upacard on the screen. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
The Good Wife is available on Netflix, but also available for purchase from Amazon. If you haveaNetflix subscription logged in, hitting play will take you straight to the next unwatched episode in Netflix. ဒါဟာအစာရှောင်င်, easy to use and transformative if you know what you want to watch.
Hold the button and say ‘turn the lights on’. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
It’s not quite as fast as the Fire TV box, but it is half the price (ထိုသို့, သို့သော်, quitealot faster than the last version of the Fire TV stick)
အကောင်းအဆိုး: အသုံးပြုမှုအားရိုးရှင်းတဲ့, easy set up, ကျစ်လစ်သော, good remote, slick interface, wide UK catchup service support, Alexa integration
← Samsung ရဲ့ Galaxy S8 မှာနဲ့ S8 မှာ + သင်္ချေ display နဲ့အတူထုတ်ဖော်ပြသ’ အဆိုပါအွန်လိုင်းသူလျှိုများ Escape လုပ်နည်း →